NewsOfTokha :: कथा “म विवश छु” |
कथा “म विवश छु”
आजको साहित्य दर्पणमा हामीले टोखाका स्रजकश्याम काजी श्रेष्ठ द्धारा रचित म विवश छु नामक कथा लिएर आएका छौं । यो कथाउहाँले प्रकाशन गर्न लागेको कथा संग्रहबाट लिएका हौँ । कथा यसरी सुरुहुन्छ ।
हे नाथ आज यो बेला मेरोत्यो अतितका रहरहरु हाँसो र खुशीहरु पीडाहरु बनेर पलपल यो मेरो मुटुमाविझाई रहेको छ । समयले पनि मलाई तड्पाई रहेको छ । म पानी विनाको माच्छा झैतड्पी रहेको छु । र यता उता भैतारीदै पानी खोज्छु तर सुख्खा जमीन सिवायमैले केही पनि भेत्न सकिन र भेट्टाउन पनि सकिराखेको छैन । यही सुख्खाजमीनमा भए पनि जीउँने प्रयास गर्छु । जीवनको श्वास फेर्ने प्रयास गर्छ । तरसक्दिन म निसासिन्छु , शिथिलता र विवशतामा रुमलिन्छु । मलाई बाध्यताकाअसंख्य साङ्गलाहरुले बाधिन्छ र दुःख पीडा दिएर पलपल तड्पाउछ । पलपल मर्नुपर्ने बाध्य बनाई दिन्छ । त्यसैले यसरी पलपल तड्पेर पलपल मरेर जीउनु भन्दाएक पल मर्नु राम्रो थानेको छु । यसरी यो जीउदो लाशलाई घिसारेर जीउनु भन्दासदाको लागि लास बन्नु उपयुक्त थानेको छु मैले ।
आज यो बेला मेरो वरी परीकालहरु घुमि रहेको छ । यी ब्यथा नुबुझ्ने समाजका काल र नागहरु मलाई डस्नफुङ्गकारेर मेरो अघि पछि घुमि रहेका छन । डर लाग्दो रातारात आँखा देखाउदैमलाई यो मेरो बेक्कार र ऋण युक्त जिन्दगीलाई समाप्त गर्न आग्रह गर्दैछन । मपनि यो बेक्कार र ऋण युक्त जिन्दगीलाई लासमा परिवर्तन गर्ने निर्णयगर्दैछु । मेरो यस्तो निर्णयले तपाईलाई दुःख लाग्छ होला । म विनाको जिन्दगीजीउन तपाई र छोरालाई पनि गाह्रो पर्छ होला तर म के गरौ त ?
अनगिन्ती आशा र सपनाहरु बोकेर बटुलेको जिन्दगी नै खोटो र अर्थहिन भएपछि खोटो जिन्दगी लिएर जीउन र जीवन बिताउन तपाईलाई पनि कठिन हुन्छ । मलाईपनि कठिन भै रहेको छ । रमाईलो दिनहरुको कल्पना गरी सुखमा जीवन बिताउनेसपनाहरु शिशा झै चक्नाचुर भए पछि त्यस लाई बटुल्न पनि सक्दैन । त्यो शिशाजोडेर त्यसमा आफ्नो आकृतीलाई देख्न र थम्याउन पनि सक्दैन । आफ्नो आकृतीदेख्नै सक्ने भए पनि त्यो फुटेको ऐनालाई अलछिनिको रुप दिएर प्रयोग गर्दैन ।त्यसलाई फालि दिन्छ ।
मपनि आज त्यस्तै भएको छु । म कयौ टुक्रामा टुकी सकेको छु । हिजो सम्म मेरोविवश्व गरेर आफ्नो लाखौ रुपैया मेरो जिम्मामा लगाउनृहरु आज मलाई विवश्वासगर्दैन । यो बेला ममा कसैको विश्वास छैन भनौ म अहिले कन्टिनरमा फ्याकिएकाफोहोर जस्तै भै रहेको छु । सायद त्यसको बढी महत्व होला मेरो छैन ।
मेरोपीडामा कसैले सान्तोना दिदैन सिवाय तपाईले थाकी सके होला मलाई सान्त्वना रप्रोत्सान दिदै तपाई पनि कति दुःख दिउ म तपाईलाई ? फेरी आकृती देख्न नहुनेऐना लिए र त्यसमा आकृति हेर्न तपाई लाई पनि गाह्रो हुन्छ । गाह्रो भईरहेको पनि छ । यो बेला टुक्रिएको ऐना लाई जस्तै मलाई पनि अल्छीनिको नामदिएर गलत दृष्टीले हेर्दै छ । यो परिवार र समाजले हेर्नु पनि स्वभाविकै हो ।त्यसैले म पनि यो टुक्रिएको ऐना रुपी जिन्दगिलाक्ष्ए फाल्ने प्रयासगर्दैछु । यो जिन्दगिलाई निमित्यान्न गर्न खोज्दैछु । तर यो कलिलो बालकप्रति दया लागि रहेको छ । माया ममता यत्रतत्र छरि रहेको छ । आखिर आमा न हुँनौ महिना सम्म गर्भमा राखेर प्रशव पीडालाई सहेर जन्म दिएको सन्तानलनई यतिसजिलै कहाँ छोडेर जान सक्छु र । यति धेरै माया ममता हुँदा हुँदै पनि मैलेआमाको कर्तव्य निभाउन सकिन । आमाको कर्तव्य निभाउन नपाउने भएको छु । योमेरो दुध पिलाउन नपाउने भएको छु । मेरो कर्म त खोटो थियो र खोटो भयो पनि तरयसको कर्ममा किन खोटो लेखि दिएको ? किन यस माथी अन्न्याय गरेको ? आखिरयस्ले के गल्ती गरेको थियो र ? तिन महिनामै आमा गुमाउनु पर्ने भएको,आमाकोदुध छोड्नु पर्नै भएको,आमा टोकुवा र अल्छिनीको र टुहुरोको उपनाम पाउनलागेको । म सोच मग्न छु ।
हे नाथ(प्राण) मैले त आमाको कर्तव्य पुरा गर्न सकिन तपाईले आफ्नोकर्तव्य पुरा गर्नु होला ? यस लाई तपाई आमा र बुबा दुबैको माया र ममता दिनुहोला । आमा र बुबा दुबै बनेर यसलाई लालन पालन गर्नु होला सायद तपाईलाईकठिन हुन्छ होला । गाह्रो पर्छ होला । तर मैले के गरौँ त ? कर्मको लेखाईमेत्न पनि त सक्दैन । कर्मको लेखाई नभोगी बस्न पनि सक्दैन । यही कर्मकोलेखाईले गर्दा आज म एउटा राम्रो आमा, पत्नी, बुहारी बन्न पनि सकि रहेको छैन। आमाको भुमिका निभाउन पनि सकि राखेको छैन ।
हुनत म अरुको नजरमा आमा बनि सकेको छु । आमा भई सकेको तर म मेरो आफ्नो नजरमाकयौ कु आमा साबित भई रहेको छु । मेरो खिल्ली उदाउदै छन,मेरो आत्माले तँकस्तो आमा ? आफ्नौ सन्तानलाई पनि आमा बनेर देखाउन नसक्ने ? तँ त आमाकोरुपमा कलंक हो । पापी, कायर र अभागिनी आमा हो । यस्तै यस्तै अनेक ”कु” आमाको उपनामहरु दिएर गालि गर्दैछन् । अनेक प्रश्नहरु गर्दै छन म मायी मेरोआत्माले ।
म भने सब गालिहरुलाईसजिलै आत्मा सात गरेर मौन बस्दैछु । किन की मैले यो बोझ युक्त जिन्दगीलाईविश्राम दिने निर्णय गरी सकेको छु । यसलाई विश्राम दिनु पनि पर्छ मैलेत्यसैले आत्मा संग बहस गर्नु भन्दा मौन बस्नु उचित थानेको छु मैले ।
तर म कायर हैन, कायर बनेको पनि छैन । यदि कायर भएको भए गाउँघर रसमाजमा म उदाहरणिय बन्ने थिएन होला, मैले आज यो बेला यो दुःखलाई भोग्नुपर्ने थिएन होला । यी मुटु भित्र पल पल बिझाउने पिडाहरुलाई सामना गर्नुपर्ने थिएन होला ? यो अमुल्य जिन्दगीलाई सिध्याउने निर्णयमा पुग्नु पर्नेथिएन होला । म कायर नहुँदा नहुँदै पनि यो बेला मलाई यी कायरताकोजन्जीरहरुले मेरा हात पाउहरु कसिएर बाधिँएर कायर हुन बाध्य बनाउदैछन ।अहिले यो बाध्ने क्रम क्रमश अगाडी बढदै आज यो मेरो घाटीको पासोकोरुपमासल्बलिदै मेरो घाटी बाधिन तम्सीदै छन । म विवश छु त्यसैले यि जन्जीरहरुपासो बनेर मेरो वरीपरी सल्बलाउदा पनि केहि प्रतिकार गर्न सकिन चुपचाप मौनरहि घाटी थाप्नु सिवाय । र त आज म बलिका बोका झै चुपचाप आफ्नो गर्धन थाप्दैछु ।
यो बेला मेरोजीवनलाई सिध्याउन मलाई आग्रह गर्नेहरु, म माथी दया गर्दैछन । मेरो अन्तिमइच्छा सोध्दैछन । तर अन्तिम लक्ष्य नै मृत्युलाई अंगाली सकेकाको अन्तिमइच्छा के हुन्छ र ? तर पनि म उनिहरुको नियमलाई पालना गर्दैछु । म मेरोअन्तिम इच्छा अगाडी सार्दैछु । मैले दुई चार मिनेट सोच्न पाउँ ।
मेरोइच्छा सुन्ने बितिकै बाधिएका सारा जंजिर र डोरीहरु फुकाएर मलाई फेरी एकफेर स्वतन्त्र छाडी देऊ । अब यो बेला म स्वतन्त्र छु । र म सोचन तयारहुँदैछु । ति बितेका दिनहरुलाई सम्झीदै छु । आँखा चिम्लेर अतितहरुमादुब्दैछु ।
कति रमाईला थिएति दिनहरु । बहिनी र म मिलेर काम बिग्राँनै दोष जति सबै दाजुको टाउँकोमाथोपडी दिन्थ्य । गाली पनि दाजुले नै खान्थ्यो । दिदि त्यती चक चक गर्नुहुन्न । चुपचाप हाम्रो चकचके पना हेरेर बस्नु हुन्थ्यो । सायद घरको ब्यथाउहाँलाई थाहा भएर होला उहाँ चकचक गर्नु भन्दा आमालाई सहयोग गर्नु र घरकोकाम काज गर्न रुचाउनु हुन्थ्यो । त्यसैले होला दाजुलाई आमाले गाली गर्नुभयो भने पनि काम हामीले बिगारेको भनेर आमा समक्ष पोल खोली दिनु हुन्थ्यो ।अनि आमा हामीलाई केही गाली गरेर भित्रभित्रै माया गर्नु हुन्थ्यो । तर मभने चकचकको चकचके नै रहे । मैले चक चकेपना छोडनै सकिन । स्कुलमा समेट हामीदुई चार जना साथीहरु मिलेर चक चक गरी रहन्थ्ये । नचाहिदो आरोप लगाएरकेटाहरुलाई हेड्मास्तरको सामु उभ्याउन लगाउन्थ्ये(कुत्न लगाउन्थ्ये । योकाममा तपाई पनि एक चोटि फस्नु भएको थियो । मलाई आज सम्म पनि याद छ । यस्तैचक चक गर्दै म क्याम्पस स्तर सम्म पुगे ।जब म क्याम्पसमा वातावरणमा घुलमिलिगरे र त्याहाका साथीहरुधको लक्ष्यहरु सुने त्यस बेला ममा पनि केहि गर्नेसोच आयो र मैले परिवारीक वातावरण प्रति नियालेर हेरे ।
दाजु एक्लैले घर व्यवहार दुई बहिनी र एक भाईलाई पढाउन खर्च गथ्र्यो ।र त दाजु दिन रात मेहेनत गरेर काम गथ्र्यो । दाजु बेलुका थकाईले लखतरानपरेर आउनु हुन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा दाजुलाई देखे पछि मैले परिवारमा केहिसहयोग गर्ने अठोट गरे परिवारीक समस्या हल गर्न नसके पनि आफ्नो पढाईको खर्चआफैले निकाल्ने सोत बनाए र नोकरीको खोजी गर्न थाले ।२–४ दिनमै साथीहरुकोसहयोगमा एक फाईनाइन्स कम्पनिमा काम पाए । मैले काम पाएको संस्था यो बेलाभर्खरै मात्र चर्चामा आई रहेको थियो । एउटा दुईवटा मात्र खोल्दै थियो ।मेरो काम र ट्यालेन्ट हेरेर मलाई सेलेक्ट गर्यो मलाई काम दियो । मैले कमापाएकोमा म ज्यादै खुशी थिए । मेरो काम बजार प्रतिनिधीको थियो । मैले बजारमाहिडेर यो संस्थामा पैसा जम्मा गर्ने ग्राहक खोज्नु पैसा जम्मा गराउनु थियो। म यो काममा सफल हुँदै गए । मैले एक पछि अर्काे गर्दै सफलताहरु हातपार्दै अगाडी बदी रहे । हुँदा हुँदै एक वर्षको अवधिमा मेरो गाउँको सबै नातागोता साथी भाईहरुलाई मैले काम गरेको संस्थामा पैसा जम्मा गर्न लगि सकेकोथियो । मैले लाखैको कारोवार गरी सकेको थिए । म गाउँलेहरुको पैसा सञ्चरगर्ने विश्वासिलो माध्यम भै सकेको थिए । मैले काम गर्ने संस्थामा पैसाजम्मा गर्न सबै गाउँले साथीहरु उत्साहित थिए । यही गाउँले साथीहरुकोसहयोगले गर्दा मैले दिन प्रतिदिन सफलताहरु हासिल गर्दै अगाडी बढदै गए । यहीसफलताले गर्दा म यहाँ सम्म पुगेकी सिङ्गो गाउँमा नै म उदाहर्णीय बन्न पुगे।गाउँमा कसैले आफ्नो छोरा छोरीहरुलाई सम्झाउन वा गालि गर्नु प¥यो भने मेरोउदाहरण दिनु हुन्थ्यो । म त्यो बेला ज्यादै खुशी हुन्थये । खुशी हुनु पनिस्वभाविकै जस्तो लाग्छ ।
अब म ठुली भै सकेको थिए । आफ्नो जिन्दगीलाई कसैलाई सुम्पिनु थियो मैले ।आखिर छोरी मान्छे न हुँ । २० २५ वर्ष सम्म आफ्नो परिवार संग हाँसो खेल्योरमायो र बीस, पच्चिस वर्ष एकै पलमा पराई बनी जानु पर्ने । आफ्नोलाई छोडेरपराईलाई अंगाल्नु पर्ने । यो प्राकृती र सृष्टीको नियम पनि हो । यहि नियमभित्र म पनि बाँधिए । बुबाले पनि आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न मेरो विवाहकोकुरा म संग राख्नु भयोको थियो । म पनि यहि नियम भित्रको सिमामा(डाइरा) रहेरनाई नभनि को केटा ? कहाँको ? को हो ? भनेर सोध्यको थिए । जब बुबाको मुखबाटतपाईको नाम सुने त्यो बेला म अलि डराए । अलि अलि लाज लाग्यो र म तिअतितहरुमा दुब्न थाले । केहि सोचेर मनलाई थामेर तपाई संग जीवन बिताउनेसपनामा दुबेर बुबालाई विवाहको लागि स्वीकृती दिए ।
क्रमशः यस कथाको बाँकी अंश अर्को साता प्रकाशन गर्ने छौँ ।
तपाई संगको यात्रामा म ज्यादै खुशी थिए । परिवारमा पनि उतिकै प्यारो थिए म ।मलाई मैले गर्ने कामको निरन्तरता पनि दिई रहनु नै भएको थियो । यस्लेगर्दा पनि म परिवारमा प्यारो नै थिए । मलाई लाग्छ एउटा जागिरदार बुहारीपाएकोमा उहाँहरु पनि खुशी नै हुनुहुन्थ्यो । अनि जब हाम्रो मायाको चिनोलेजन्म लियो यो बेला हामी र हाम्रा परिवारमा अझ बढी खुशीले छाएको थियो ।हाम्रो परिवार माझ अझ बढी म पनि प्यारो बनेको थिए । जस्ले गर्दा ममा अझ बढीहौसला र हिम्मत बढेको थियो । र त म पनि भविष्यमा यसरी परिवार माझ प्यारोबनी रहने,र यसरी नै खुशी रही रहने सपनामा चुलुम्म दुबेर मेरो काममा निरन्तरलागि रहेको थिए । ति आउने दिनहरुका दुःख सुखहरु हामी दुबै मिलेर पार गर्नेमिठो कल्पनाहरुमा दुबेर हरेक दुःख कष्ट र समस्याहरुमा एक अर्काले साथ दिनेकसम खाएर हामी निरन्तर अगाडी बढी रहेको थिए । नयाँ जिन्दगीको नयाँ बाटोमायात्रा गरी रहेको थिए ।
तर मेरो सपना बिपरीत भै दियो । हाम्रो हाँसो खुशी र सपनाहरु क्षणिक भै दियो। हाम्रो खुशी र परिवार माझ प्यारो बनेको म गाउँघर माझ उदाहर्णिय बनेकोदेखेर सायद भगवानलाई त्यसैले मेरो खुशी र सपनाहरु लुटेर आज यो अवस्थामापु¥याई दिएको छ । आज यो बेला मैले काम गर्ने संस्थाका संस्थापकहरु सारापैसा कुम्ल्याएर भागेको छ ।मेरो विश्वासमा जम्मा गरी राखेको लाखै रुपैयाहरुमेरो थाप्लोमा पारेर । मेरो प्रति पलाई रहेका विश्वासहरुलाई चक्नाचुरपारेर,मलाई समाजमा,परिवारमा खपहेलित बनाएर,तिमी अब एकलै संघष गर भनेर ।
भनिन्छ जिन्दगी संघर्ष हो । तर मैले यो बेला यो जिन्दगीलाईसंघर्ष गर्न नसकने भएको छु । यो संघर्षशील जिन्दगी जीउन नसक्ने भएको छु ।हो जीवन संघर्ष हो तर हाँसो खुशी र विश्वास विना संघर्ष गर्न पनि सक्दिन ।असम्भव जस्तो लाग्छ मलाई ति पाएको हाँसो,खुशी,प्यारोपन र विश्वास एकै चोटितहस नहस भए पछि कसरी गर्ने त ? कसले संघर्ष गर्न सक्छ त ? मैले पनि यि सबचिज गुमाई सकेको छु । अझ भनै यो बेला म गाउँघर समाज र परिवार माझ अपहेलितअपाङ्ग जस्तै भै सकेको छु । म प्वाँख काटेको चरी जस्तो छु । यो हात खुट्ठाहुदैको अपाहिज जीवन जीउन मलाई गाह्रो भै रहेको छ । सायद म जन्म जात नैअपाङ्ग भएको भए मेलै अपाहिजको यो जीवन जिउन सिकी सक्थ्ये होला । जन्म जातमेरो प्वाख न भै दिएको भए मैले उड्ने चहाना र सपनाहरु सजाउदैन्थये । होलातर स्वच्छन्द बोकिएको बेला मेरो सुन्दर प्वाखहरु काटि दियो मेरो सुन्दर हातपाउँहारु भचि दियो । जस्ले गर्दा यो संघर्षसिल जिन्दगीमा संघर्ष गर्ने आँटम मा आएन ।
त्यस माथी पनि हिजो मलाई माया अगी हौसला र प्रत्साहन दिनेहरु आज घृणा रतिरस्कार गर्दैछन । मेरो मुटु भित्र अनेक शब्द बाणहरु प्रहार गरी पीडा दिएरमेरो मनोबल घटाउदै छन । भनै यो बेला म फेरी गाउँघर समाजमा र परिवारमाघृणित भै सके । यसरी अपहेलित घृणित हुनु र विश्वास तुईनु पनि स्वभाविकैथियो । फाईदा बिनाको चिज वस्तु गाउँघर, समाज र परिवारमा राखेर विना सितैठाउँ ओगेतेर राख्न पनि सक्दैन र राख्नु पनि हुदैन । त्यसैले मैले पनि योबेकारको वस्तुलाई हताएर ठाउँ खाली गर्न खोज्दै छु । यो घिनाउदो र निर्लजसमाज र परिवारबाट विदा लिने फैसला गरेको छु । किन कि यो बेला क विवश छु ।
मलाई यो अवस्था सम्म पु¥याउने र मेरो गलाको पासोको रुपमासल्वलि रहेका यी कैले बमक गरेको संस्थाको र समाजका ठगी व्वासाँहरु जो गरीवकिसानहरु र गरीव जनताहरुको रगत पसिनाले एक गरी कमाई राखेको पैसा ठगी गरेरभागे, मलाई यो अवस्थामाल पु¥याएका फाईनाईन्स कम्पनीको कागजका टुक्राहरुजलाई ति ठगी व्वासाहरु लाई खरानि बनाएको महसुस गर्दै छु ।
हुन त यी कागजका टुक्राहरु संगै जलि खरानि हुन म लागि रहेको छमलाई पनि । तर यी व्वासाहरुको नाममा जलाएकोले र यो देह माथी तपाई र छोराकोअधिकार भएकोले मैले यो अधिकार हन्न गर्न चाहिन । किन कि मैले विवाह मण्डपमाअग्नीलाई साक्षी मानेर यो देह तपाई लाई सुम्पी सकेको छु (सुम्पी सकेको थिउ।) । त्यसैले मैले जलेर खरानि हुन चाहिन । हुन त मैले अग्नीलाई साक्षीमानेर संगै मर्ने संगै बाच्ने, परिआए तपाईको लागि ज्यानै सुम्पी दिने कसमखाएको थिए । तर आज आफ्नो पीडा सामना गर्न सकिन र त्यो पीडामा यो देह त्यागगर्न तयार हुदैछु । तपाई लाई अझ बढी पीडाहरु दिएर यसमा मलाई अभागिनी सम्झेरक्षम गरी दिनु होला ल ।
हे नाथ, हे प्राण जब यो शरीर लाशमा परिन्त हुन्छ । मेरो प्राण उडेरमेरो शरीर निर्जीव र अचल बन्छ त्यस बेला यी समाजका काला नागहरुको छाँयापनि मेरो लाश माथी पर्न नदिनु । मेरो शोकमा आँशु पनि झार्न नदिनु । अनि योमेरो लाश माथी तपाई र छोराले दागबत्ती दिए म भाग्यमानि थान्ने छु । मेरोसपना पुरा भएको महशुस गर्नेछु ।
ल त प्राण मेरो वरीवरी मडारी रहेको यम दुत रुपी काल नागहरुलेमलाई स्वतन्त्र छोडिएका ति जन्जीर साङ्गदाहरुले फेरी मेरो हात पाउहरुबाध्न लम्सिदै छन । मेरो सोचहरु पुरा गरी मृत हुन आग्रह गर्दै छन । त्यसैलेविदा हुन चाहान्छु ।
हे नाथ, मैले यो बेला पुनर जन्ममा विश्वास गर्न थालेको छु । कसरीविश्वास बढ्यो त्यो मलाई थाहा भएन र छैन पनि । तर पनि पुनर जन्मकोविश्वासमा अडेको छु । यदि चादै पुनर जन्म लिन पाए धर्तीमा भेत्न पाउँ । यदिसकिन्छ भने पनि माटो मै भेट्न पाउँ ।
विदा… विदा… विदा !!!
उहि तपाईकी अभागी